NEWS Archives - Postmandu
2022-04-05 2022-04-05 PostmanduLeaveaComment on ज्योतिको त्याग (भिडियो)
काठमाडौं । ज्योति खतिवडाको सन्देश मुलक गीत सार्वजनिक भएको छ । ज्योतिको त्याग बोलमा रहेको गीत सार्वजनिक भएको हो । राष्ट्रिय नाचघर जमलमा चित्रपुर अभिभावक स्वावलम्बन समूहले आयोजना गरेको मस्तिष्क पक्षाघात तथा अन्य अपाङगता भएका बालबालिकाको दिवा कक्षा संचालनका लागि सहयोगार्थ च्यारीटि शोमा गीत सार्जवनिक गरिएको हो । अपाड्गता भएका बालबालिकाको संरक्षकको कष्टकर जीवन भोगाई, […]
2022-03-05 2022-03-05 PostmanduLeaveaComment on भाइको जीवन बचाइदिन दिदी अनिताको अपिल
बेसीशहर । लमजुङको बेसीशहर नगरपालिका-१० का २९ वर्षीय विकाश घिमिरे हाल जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन् । विगत दुई वर्षदेखि उनी ब्लड क्यान्सरको सिकार बनेका छन् । उनको भारत, नयाँ दिल्लीमा रहेको राजिव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनको उपचारमा थप समस्या भएको छ । ‘भाइलाई क्यान्सर पुष्टि […]
तनहुँ । नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र न. १ तनहुँको कोषाध्यक्षमा व्यास-२ निवासी पबिन्द्र भट्टराई र प्रवक्तामा व्यास-८ रिस्ती निवासी हरिप्रसाद शर्मा मिश्र मनोनित हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिति क्षेत्र न. १ तनहुँको पहिलो बैठकले कोषाध्यक्षमा भट्टराई र प्रवक्तामा मिश्रलाई मनोनित गरेको हो । कांग्रेसको विधान बमोजिम कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनित हुनको लागि […]